Ọwa ndagwurugwu ahụ dị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nyochaa Canyon spectral - kedu iji mee
Nyochaa Canyon spectral - kedu iji mee
Ọwa ndagwurugwu ahụ dị mma?
Okwu mmiri CanyonCF 29 8.0 akara ala
Otu igwe kwụ otu ebe na 150 / 160mm weere igwe kwụ otu ebe 'nzọ ụkwụ' nwere ike ị na-agbanye nkọwa ya ntakịrị, mana were ya maka ihe ọ bụ naSpectralbụ ihe incredibly ike igwe. Aga m ekwu na ọ bụ otu n'ime ịnyịnya ígwè kachasị ike n'ahịa taa.Dec. 12 2020
Nke a bụ igwe kwụ otu ebe nke ọtụtụ mmadụ rịọrọ maka ya ma anyị chere na ọ bụ akụkụ ama ama ugbu a yana igwe kwụ otu ebe ga-abụ Oge ịgba ọsọ nke mba anyị wetara Spectral 29 na Beechworth MTB Park iji tinye ya na ọkwa ya na ihe kpatara ya anyi wetara ya na Beechworth? Ọfọn, ebe dị ebe a bụ ebe nyocha kachasị mma maka igwe kwụ otu ebe nke njem a - mee ya-ụzọ ịnyịnya ibu 29-inch. Ebe a jupụtara na okwute granite na ụdị traction dị iche iche nke ọ bụla mita igwe kwụ otu ebe gị na-eme. ụdị ihe niile, ya mere, anyị nọ n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Victoria iji nwalee Spectral a Ya mere, ka anyị gaa n'ụzọ, nke ahụ dị mma, Spectral 29 bụ igwe kwụ otu ebe kachasị ọhụrụ nke Canyon na nke a bụ mmalite nke ọhụụ 27.5 dị ugbu a nke ga-anọ na Canyon nwere nnukwu wiil 29-inch wiil n'ihu na n'azụ na o nwere otu njem dika nke ugbu a Spectral, yabụ 150mm njem azụ na dabere na ihe nlereanya ị họọrọ, ndụdụ nwere njem 150 ma ọ bụ 160mm, nke na-eweta ya n'ime nke ike ike nzọ ụkwụ bike nke mere na anyị na-ekwu okwu banyere anyịnya igwe dị ka Pụrụ iche Stumpjumper EVO, Giant Trance X, na Norco Sight, nke dị ugbu a site na otu etiti ahụ, ya na nnukwu igwe kwụ otu ebe na-agbakọba na Spectral 29 na-enweta ihe niile chasọn carbon ọhụrụ , e nwere a ton nke ukpụhọde niile gburugburu nke a igwe kwụ otu ebe na na otu nke kasị elu geometries anyị hụrụ si kaniyon nke a bụ ihe na biking ugwu na Beechworth MTB Park na-ada ka ihe dị iche iche 27.5 nke mbụ ulo oru, ọ bịara na a dum ụyọkọ nke atụmatụ dị egwu ma site n'iji nke a Spectral 29 enyefela ọtụtụ atụmatụ ndị ahụ ka anyị wee ghara inwe IPU headset ọzọ.
Nke a bụ n'ihi na tube dị elu 29 dị nkọ dị ntakịrị karịa ụdị 27.5-inch. Na-agaghịzi mkpa The USB ọwara na-arahụ kwa, nke mere na USB nsochi usoro ke ala tube site na etiti na-arahụ.
Ogwe dị n'ime ime maka ịhazi oche oche dị elu kama anyị nwere mpempe akwụkwọ mpụga nke dị na mpụga nke pụtara na ụlọ elu nwere ike ime ka ọ dị ntakịrị ma nwee isi mkpuchi isi maka ọdịdị dị ọcha Otu n'ime atụmatụ ọhụrụ na etiti a, e si onye mgbasa ozi kachasị ọhụrụ Downhillbike Ntinye a na-agbanwe agbanwe maka ngwaike dị oke mkpa bụ ihe mkpuchi dị mkpa, yabụ ị nwere ike iji dochie ihe ntinye ahụ n'emebighị etiti ahụ n'onwe ya. Nke a ga-amasị ndị ọrụ igwe ahụ ebe ahụ; Oghere Spectral 29 na-agagharịkwa na ọdụ mgbodo a na-agbanye ala karịa usoro ihe ntanetị nke 27.5-inch.
Igwe kwụ otu ebe a na - enwetakwa ihe ncheta ọhụụ. Nke a abụghị ihe dị iche na ihe anyị hụrụ na steeti Stumpjumper, n’onwe ya, ọ dị ntakịrị karịa nke gara aga Spectral 27.5 CFR, Canyon na-ekwukwa na o siri ike karịa.
You'll ga-ahụ na oche na-anọ na-abụkwaghị a abụọ-mpempe imewe, ma na-n'ezie ejikọrọ na a akwa n'azụ oche tube na yinye na ọnụnọ na-ukwuu sturdier na a igwe kwụ otu ebe Canyon ka n'ezie lekwasịrị anya na jirichaa isi nke ọhụrụ a carbon. eku. E nwere ụdị anọ dị na ụdị 29 dị iche iche maka 2021, na ọnụahịa na-amalite na $ 5,149 maka Spectral CF7 ma na-aga $ 9,399 maka CF LTD, ugbu a, a na-ewu ụdị ihe nkiri 29 ahụ anọ dị gburugburu otu eriri eriri carbon, Canyon bụ wuru maka ụdị Alloy niile na-ezochi nzuzo, mana anyị na-eche na ha ga-agbakwunye na nso nso ahụ n'ọdịnihu A na-anwale igwe kwụ otu ebe ebe a bụ Spectral 29 CF 8.0.
Ọnụ ego maka nke a bụ AUD 6,250 gbakwunyere mbubata iji weta n'ụlọ gị. Banyere kit, Spectral CF 8.0 na-abịa na Fox Performance Elite nkwusioru ngwugwu anyị nwere 36 GRIP2 ndụdụ n'ihu na a float DPX2 damper na azụ a Shimano XT group tinyere anọ-pistin brek anyị nwere DT Switzerland XM 1700 wiilị na ndị a kwadebere na Maxxis Minion taya Nchikota na 2.5 sentimita asatọ na DHF na ihu na 2.4 nke anụ ọhịa ahụ DHR2 na azụ enwetara Weight maka anyị ịnyịnya ígwè nyocha nke ọkara guzobere tubeless na ntukwasi na anyị pedals bụ 14.4kg Beechworth MTB Park zuru nke akụkọ ntolite ị nwere ike ịnụ ya, ị nwere ike ịhụ ya, ị ga - ahụ ya, ọ bụ nke a, m hụrụ na e chere na ọ bụ okpu mbụ nke Ned Kellys mgbe ọ bụ nwata ma ọ bụ asịrị ndị ọzọ na nke a bụ iko ikpeazụ nke osikapa tupu ejide ya. ezigbo artifact kwere ya ma ọ bụ na osikapa Ude Echefula Lovehụnanya Have Nwere na Ọdịdị jiometrị bụ akụkọ buru ibu na Spectral 29 Canyon na-abụkarị akụkụ nchebe karịa nke ihe, mana ndị na-ese ihe azụghị na Spectral 29 yabụ anyị kwukwara na a 64 ogo isi angl e n'ihu, nke dị ihe dị ka ogo 2 dị mma karịa nke dị na Spectral 27.5 dị ugbu a, ọ dịkwa ogologo, iru ruru 460 millimeters na ọkara ọkara a nwalere ebe a na oche oche dịkwa ihe dị ka ogo atọ steeper.
Nke a bụ ntụpọ oche dị irè nke ogo 76.5, ugbu a anyị na-ekwu maka akụkụ. Ha na-agbanwe na igwe kwụ otu ebe a.
Ihe nkiri 29 bụ nke mbụ Canyon igwe kwụ otu ebe iji gosipụta mgbapụta geometry dị na ugwu ugwu dị ala. Mgbe ị na-atụgharị mgbawa a na ọnọdụ dị elu, a na-ebuli ihe nkwado ala site na milimita asatọ na isi na oche oche site na ọkara ogo, na ọ bụ ezie na igwe kwụ otu ebe a dị ntakịrị ma dị ogologo karịa nsụgharị 27.5-inch, Canyon nwere azụ azụ ọ dịtụ mkpụmkpụ, nke ahụ bụ 437 millimeter chainstay ogologo na nke a Bikecheers Captain Wiz Cheers, ee, cheta, maka steaks nke nkezi nha, ihe ọhụrụ jiometrị bụ isi ihe na otu ọma Spectral 29 na-arịgo ma n'eziokwu igwe kwụ otu ebe a bụ iji tụnyere Spectral. 27.5 dịkwuo irè ma nwee ikike ịrịgo ka mma.
Ọnọdụ ahụ na - edugakwa na oche oche a dị elu, nke na - enyere gị aka etiti gị n’etiti wiil ndị ahụ ma na - atụgharịkwa obere ihe na - adịkarịsịrị elu, ebe ị chọghị ime nke a n’elu ịrị elu nke anyị na - achọghị, nwere obere leverage na azụ nkwusioru. Iji ruo maka mgba ọkụ mkpakọ na azụ azụ, abụ m onye na-anọdụ ala na-agba, n'ihi ya, m na-ahapụ ujo ahụ oge ọ bụla m na-aga n'okporo ụzọ. Mick bụ onye na-eme ihe ike ike na ọ na-eme ihe ike ka ọ jiri ọnọdụ mkparịta ụka ahụ dị n'etiti iji mee ka ụjọ azụ nwee ike.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na nke a igwe kwụ otu ebe nwere ihe mgbochi squat tụnyere ndị 27, ma ọ bụ ihe na-erughị 100% na ọ pụtara na n'azụ nkwusioru ka dịtụ arụ ọrụ na ịrịgo, ị ga-esi na-egwu egwu na nnukwu 29 -Inch wiil ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-arịgo n'elu ihe ma e jiri ya tụnyere obere wiil, ugbu a na slack 64-degree isi ahụ, ọ dị ntakịrị ịkpafu site na wiil dị n'ihu ị ga-elekwasị anya na nkesa dị arọ gị na njikwa, n'agbanyeghị nke a Ọ bụ nnọọ ogologo igwe kwụ otu ebe ka ọ dị ka ọ gaghị ebuli nke ahụ na nnukwu ndọghachi azụ. M eleghị anya, na-ahọrọ 30-nha nha yinye, nke a bụ a mara mma nnukwu touring igwe kwụ otu ebe, ka emechara, na m na-ahụ na m mgbe ụfọdụ jammed m pedals na nkume na teknuzu ịrị.
Ugbu a, egbuteghị m ha nke ga-echegbu onwe m, mana mgbe ịchọtara onwe gị, ị na-agba ịnyịnya na-arụ ọrụ siri ike ma na ịchọrọ ka nwepụkwuo ala, ọ bụrụ na ị gbagọrọ mgbawa geometry ahụ n'ọkwa dị elu, ị ga - enweta ntakịrị ala nwechapụ a e climbs n'ozuzu, ọ bụ ezie na m nwere ikwu na nke a bụ a kediegwu 29er arịgo igwe kwụ otu ebe na 150mm nke njem. Nwere ike ịhụ site na ebe a na-adọba ụgbọala na Beechworth MTB Park ọ bụ ezigbo ezinụlọ, a hụrụ m ebe a n'anya mgbe Spectral 29 bụ ezigbo onye na-arị ugwu, igwe kwụ otu ebe a bụ n'ezie ihe gbasara ụmụ ala ugbu a na isi isi ugo na ogologo n'ihu. O doro anya na ọ dị nnọọ ngwa ngwa ma kwụsie ike ma jiri ya tụnyere Spectral 27.5 igwe kwụ otu ebe a bụ ngwa ngwa ngwa ngwa ị ga - enwe ezigbo nkwụsi ike nke nnukwu wiil ndị ga - enyere gị aka ịfefe ụdị akụkụ nke ụzọ ụkwụ ọ chọrọ ụzọ ịnya ụgbọ iji jide ha arapara n'ihu taya ma ọ dịghị achọ a n'ezie n'elu n'elu ịnya style dị ka anyị na hụrụ si ụfọdụ gabigara ókè ogologo na n'elu nzọ ụkwụ anyịnya igwe na ahịa, ihe ọzọ na-enyere aka na-ahụ oghere 29 n'okpuru ịchịkwa bụ chassis carbon siri ike.
Canyon lebara anya na igwe kwụ otu ebe a ka ọ dịrị mma ma sie ike ma na-echegharị n'okporo ụzọ ahụ, ọkachasị n'akụkụ ọkpọ isi, ihe nkwado ala, na nnukwu igbe ndị nwere igbe. Ihe si na ya pụta bụ na maka nnukwu njem nlegharị anya ọ bụ n'ezie nke ziri ezi ma na-agagharị n'okporo ụzọ ahụ ma na-egwuri egwu na ọsọ nke njedebe azụ dị mkpụmkpụ obere ihe nkwado dị ala ma ọ na-ese nke ọma na nkuku nke siri ike carbon Chassis nwere ike ping a obere ihe na iji nwayọọ na-agba, karịsịa na n'ezie nkume ụzọ ụkwụ ka ọ na-akwụghachi ụgwọ a ọzọ nwere obi ike ịnya ịke na ọ maa-akawanye mma na ngwa ngwa ị na-aga. Nkwụsịtụ nke igwe kwụ otu ebe a dịkwa ezigbo ụtọ.
Anyị nwere mma Fox 36 GRIP2 ndụdụ na n'ihu nke na-enye ọtụtụ njikwa na kwa ndozi na azụ nkwusioru bụ ezi uche dị ezigbo ụtọ n'oge na-adịghị anya. Achọpụtaghị m na m na-eru nso njem zuru oke na ebe ikuku mmiri na-eme ka ụra dị na 30%, mana o nyere m ohere ịnweta njem zuru oke ma mee ka igwe kwụ otu ebe nwee mmetụta dịkwuo ndụ karị, nke miri emi, n'ihi na-aga n'ihu nkwusioru imewe The etiti wee n'ime nkwusioru njem na etiti bụ dakọtara na eriri igwe ujo, ọ bụ ezie na kaniyon na-ekwu na nke a nwere ike imebi karama nwechapụ ọbụna na a nta spacer n'ime. Ọ dịghị mgbe anyị mebiri azụ n'azụ nkwusioru na Spectral 29 otu ugboro.
Enwere nkwado dị ukwuu maka nnukwu bọọlụ na igwe kwụ otu ebe a, ọ naghị arụ ọrụ nke ọma dịka ihe dịka Stumpjumper EVO nke ahụ bụ igwe kwụ otu ebe na-atụgharị gị n'ezie site na ụzọ ahụ enwere ntakịrị nzaghachi na Spectral 29, mana n'ozuzu oke, dị ezigbo nwayọ na ezigbo nkwado buru ibu maka nkwado buru ibu na ọdịda siri ike ekele maka nke ahụ na-eme ka anyị bịaruo oge nnwale mba dị elu ebe a na Beechworth anite na-edebe ya ma nwee ezigbo oge ịmara nke a Canyon Spectral 29 wee jide ya Wil ọ bụ maka m na ịntanetị ọnụ. Spectral 29 dị ka m kwuru, ihe niile dị ọhụrụ echere m na nke a bụ igwe kwụ otu ebe na ọtụtụ mmadụ nọ na-eche maka njem ogologo njem 29er na-agba ụkwụ ma na-enwe nnukwu ọ excitedụ Echere m na ọ na-ewepụta ihu niile, wee bụrụ igwe kwụ otu ebe ka mma karịa Spectral 27.5.
Ọ dị mma karịa, ọ na-arụ ọrụ nke ọma, wiil ndị buru ibu na-egosi na ị maara onwe gị Ọ bụ ezigbo nnukwu igwe kwụ otu ebe, ọ ka dị mma ma na-adọkpụ, ị maara na ọ bụ ebe dị mfe ịnyịnya ibu na-agagharị n'okporo ụzọ n'ihi ya, m na-ekwu na ọtụtụ n'ime ọgba tum tum ndị a na-eme ihe ike na-enweta n'ezie nnukwu, n'ezie ogologo na ha nwere ike ịbụ a bit edochaghị anya na ee siri ike jikwaa e, ma nke a bụ n'ezie a mara mma mfe igwe kwụ otu ebe na-agba ịnyịnya gburugburu carbon etiti, na stiif carbon etiti pụtara na ọ bụ a bit ọzọ fun na-eme ka na-akwọ ụgbọala gburugburu. Echere m na ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ji nwayọọ na-agba, ị nwere ike ịbụ onye na-amalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịchọta gị, ị nwere ike ịchọta obere ahụ erughị ala ịnya ee, n'ozuzu ya ọ ga-adaba n'ụzọ dị elu n'okporo ụzọ ahụ ma ọ bụrụ na obi ike gị na igwe kwụ otu ebe na-etolite na ee ee m chere na ngwugwu ị nwetara na igwe kwụ otu ebe a ego ahụ dị ịtụnanya, enwere igwe kwụ otu ebe na ahịa nke nwere ike ị nweta ọnụahịa a. Anyị nwere ọtụtụ na-enweghị ntụpọ ahụmahụ na dum igwe kwụ otu ebe e nwere nanị ole na ole obere flaws dị ka rattling breeki pad na Shimano XT calipers na oche post ndozi bụ a bit arọ na isi mkpịsị aka, ma ndị ọzọ karịa nke ahụ, ọ bụ a n'ezie họrọ ngwugwu na ya dịkwa oke mma igwe mara mma ee ọ dị ọcha, dịkwa ọcha.
Ihe m ga-achọ ịma bụ na ị nọrọla oge dị ukwuu na gbalịsie ike, nke ugbu a bụ n'ezie ly nwere otu njem na ụkwụ ụkwụ dị ka Spectral. Yabụ kedu ihe kpatara ndị mmadụ ga - eji gbalịsie ike na - elegharị anya na ọhụụ? Dị ka a wuru igwe kwụ otu ebe, M nọrọ oge dị ukwuu na nke ochie 27.5 Otu na 29 Otu wee gbaa ọsọ nke ukwuu na ya.
Ọ na-adị m ka Strive na-abịa na usoro Shapeshifter nke na-eweta ya niile ọnụ. Ọ na-agbakwụnye na ịba ụba ị maara nke na ị na-arịgo maka nnukwu igwe kwụ otu ebe bụ ihe na-akpali akpali Echere m na Spectral bụ ihe na-adọrọ adọrọ karị maka ndị na-agba ịnyịnya ee ee ee ọ dị mma karịa nkasi obi ọ na-enye gị obere net nchekwa mgbe ị kpuru ìsì idingnya ụzọ ụkwụ ma ọ bụ na ebe ị na-na na na mgbe tupu Ọ bụ naanị a pared-ala, nnọọ ntakiri etiti imewe, enweghị nsogbu oge na ee, ọ bụ nnọọ ugbu a ee, na-ekwubi anyị nyochaa nke ọhụrụ kaniyon awara 29 2021, ma ọ bụrụ na ị chọrọ gụọ nyochaa zuru ezu ka anyị tinyere njikọ ahụ na nkọwapụta isiokwu dị n'okpuru ebe a, ọ ga-akpọrọ gị flowmountainbike.com.
apụl cider mmanya dị ka deodorant
Nyocha zuru ezu na igwe kwụ otu ebe a nwere ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ gbasara etu eserese, jiometrị na ahụmịhe anyị na-anwale igwe kwụ otu ebe a na Beechworth Mountain Bike Park. Pịa na njikọ a, a ga-akpọrọ gị gaa ule zuru oke nke igwe kwụ otu ebe a. Cheers ụmụ okorobịa, anyị nwere olile anya na ị nwere obi ụtọ Oge Nnwale Nnwale Mba.
Ọ bụ ihe ọhụrụ nye anyị ka anyị mara uche gị n'okwu a ma nọrọ na-ege ntị ka anyị na-aga ịnya ịnyịnya ígwè ọhụrụ na High Country ekele maka ikiri ọersụ ndị mmadụ na-enwe obi ụtọ na ebe igwe kwụ otu ebe a na-aga ugbu a. Victoria na Wil na Victoria esoro m ma ọ bụ soro m gaa New South Wales. Nye ntuli aka gị na nkwupụta ndị dị n'okpuru, ọ na-abịa m, nye anyị mkpịsị aka gị ma ọ bụrụ na ị masịrị mkpado edemede ahụ, ma denye aha na ọwa YouTube anyị ma ọ bụrụ na i nwebeghị. Ihe kacha mma nke atọ, ka anyị bụrụ nke kachasị mma nke atọ kacha mma nke das ree ọ na-abịa nso na meso.
Oh Pizza. Ooh Flylook, ọ bụrụ n’ezie ị chọrọ ịmata ihe mere anyị ji amasị Beechworth nke ukwuu na ọ na-enyere aka, ee, enweghị igwe ojii n’azụ ya, nke a ga-adị mma, nke a bụ igwe kwụ otu ebe ochie nke anu na-agba apata ụkwụ m n’izu ole na ole gara aga. i wee nwee mmetu oku n'otu oge kedu ihe m ga - ekwu gini mere o jiri di anya na mmiri ma anyi ghaghachitere ya gini mere gi ji nọrọ ebe di anya karia enyi enyi anyi kwesiri iweghachi ya echegbula enyi m echegbula, Ndị enyi mbe? oo chimoo
Bụ Canyon spektral enduro ma ọ bụ nzọ ụkwụ?
Canyon'sỌhụrụSpectral29 Nwere Ike Ime Nnukwu Igwe na Obere Igwe. Ọ bụ ụbọchị igwe kwụ otu ebe ọhụrụ naKaniyon. Oge a ọ bụ ihe ọhụrụ 150mm 29ernzọ ụkwụigwe kwụ otu ebe, naSpectral29. Nke a bụ ibu wheeled version nke ika si ewu ewu 27.5Spectralna, dị ka ị ga-amụta, nke egwuregwu na ndụnzọ ụkwụigwe kwụ otu ebe bụkwa uru na-egbu egbu.Dec. 1 2020
Ilzọ: Nabata, ndị mara mma. Adị m Trail Bike Blake, mana ị nwere ike ịkpọ m TBB maka obere. Enduro: Nabata gị ndị mara mma, Abụ m Enduro Bike Blake.
Site n'ụzọ, ị na-agbanye okwu m, nwoke. Ilzọ: Ndị a bụ ndị m mara mma, ọ bụghị nke gị. Enduro: Mba, ebidola.
Zọ: Gosi ya. Enduro: Ọ bụrụ na nwoke a anọghị ya, m gaara emejọ gị. Trengel: Ndewo.
Abụ m mmụọ ozi ụkwụ gị, mana ị nwere ike ịkpọ m Trangel maka obere. Anyị nwere igwe kwụ otu ebe abụọ. Na-anwa ịkọwa onwe gị n'okporo ụzọ ugwu.
Offọdụ n'ime anyị nwere mgbagwoju anya banyere ihe igwe kwụ otu ebe na ihe igwe kwụ otu ebe bụ, yabụ ekele dịrị ndị enyi anyị na Commencal ha nyere Trail Blake, Meta TR 29 na EnduroBike Blake, Meta AM 29. Oge eruola ịkọwa ihe igwe kwụ otu ebe abụọ a. gbasara. Ndewo, nke a bụ mmụọ ozi nzọ ụkwụ gị.
Na usoro nke taa anyị na-atụle Blakes abụọ ahụ na usoro atọ, elu ugwu, ụzọ nzọ ụkwụ na ugwu. Ka anyi bido n’ugwu. Ndi be anyi ndewo.Trail: Hi.Enduro: Hi.Trangel: I dikwala? Ilzọ: Adịla m njikere. Trengel: Trailer Bike, ị dịla njikere? N'ihi na ị na-ebu ụzọ.Trail: Ee.Trangel: Okay.
Akwa. Na akara gị, kwadebe. You dịla njikere Enduro Blake? Enduro: Ee, adị m njikere.
Trengel: Atọ, abụọ, otu, gawa. Actually mara mma dịkwa mma. Nzọ ụkwụ: Nke a bụ ọrụ siri ike, nke a bụ ọrụ siri ike, Aga m ahụ ihe Enduro Blake nwere, enwere m ike? Na-ewe oge.
Mba, lee ya. I dika onye nwuru anwu I dika onye nwuru anwuEnduro: Anwuruola m. Anwuruola m. Trail: Enwerem 3.12. Gini ka inwetara? Enduro: 3.93 .Trail: Ọ dịkwa mma. Enduro: Mba njem: Chọta agbụrụ enduro kama ịga ogologo njem, ogologo njem.
E nwere akụkụ mgbanwe ndị a ga-ebugharị ka ndị na-ekwukọrịta, mana nke ị na-enweghị oge. Oge a na - agbadakarị ma na - echekwa ihu ala mgbe niile. Enduro anyịnya igwe bụ nnoo dị arọ ma ọ bụ ugwu igwe kwụ otu ebe na-peppered maka obi ọjọọ ọduọ ọnọdụ.
Ezubere geometry nke enduro bike maka ọdịda. Dịka ọmụmaatụ, Meta Bike Mountain nwere ogo 63.63 maka isi obi ike mgbe ọ na-atụ aka ala site na ụzọ dị larịị na ụzọ siri ike, yana ogo oche 78.5 'enyi na-arịgo elu iji mee ka ahụ dị n'etiti wiil abụọ ahụ.
Gwakọta geometry a na Burly Fox 38 mil fork, a Shimano XT 1x12 gearbox nke nwere oke nkwekorita nke 500 10% na ogwe aka arịlịka siri ike site na Shimano XT4 Pop brakes ma ị nwere ezigbo ngwa agha dị mma maka ịgba ọsọ enduro na - Drive. Ihe ịma aka a bụ ụzọ nzọ ụkwụ nke nwere ọrịrị dị ike, ọdịda, jumps na ihe ọ bụla ọzọ. Anyị ga-etinye ndị na-agba ịnyịnya na akụrụngwa ha site na ụzọ ha.
You dịla njikere, nzọ ụkwụ Bike Blake? Ilzọ: Adị m njikere, Trangel. Adịla m njikere. Trengel: Atọ, abụọ, otu, gawa.
Zọ: Emechaala m. Nke ahụ bụ apịtị. Snot na-apụta ebe niile.
Uhie. Oh, ọ bụ apịtị. Dịkwa mma.
Trangel: Enduro Bike Blake, ị dịla njikere? Enduro: Emechaala m, mmụọ ozi m. Trengel: Atọ, abụọ, otu, gawa. Enduro: Emeela.
Ọ bụ ọrụ siri ike. Dude, nnaputa di ezigbo ugbua nwanne. Zọ: Ọ bụ ya, mmadụ.
Enduro: M ka nwere ike ịnụ ụtọ ọbara ya n'ọnụ m. Nke ahụ juru nnọọ anya. Nzọ ụkwụ: Mụ onwe m, dude.
Nke ahụ siri ike. Enduro: Nke ahụ bụ ihe ijuanya. Obere oge? Zọ: Temporal? Enduro: Enweghị m oge ọ bụla.
Ilzọ: Anyị amaghị, nri? Onye ahia ahia? Enduro: Trangel. Okporo: Trangel. Trengel: Ndi nwe mmadu, ee, unu abuo mere oru oma nke oma, mana ha nile dabere n’oge, obughi ya? Trail Bike Blake, ị mere ya na 43.56.
Zọ: Nke a bụ ezigbo oge, nke a bụ ezigbo ezigbo oge. Nke ahụ mara ezigbo mma. Trangel: Enduro Bike Blake, ị mere ya na 45 na 2 sekọnd.
Enduro: O siiri m ike. Ogwu: I jiri nwayọ nwayọ. Enduro: O siiri m ike.
Trengel: O siri ike. Lee gị anya, ị mere nke ọma.
Ihe niile efubeghị. Enduro: Ọ ga-aka mma oge ọzọ. Trengel: zuru ike.
Enduro: Ee. Anyị ga-aga n'ihu. Trangel: Thezọ dị n’agbata igwe kwụ otu ebe n’etiti igwe kwụ otu ebe n’etiti XC igwe kwụ otu ebe na ngwụcha ngwụcha nke Enduro, ntụzi-aka nke zuru oke maka ịpụ na apụ mana ọ na-amụrụ amị site na mbara ala n’enweghị mmetụta nke ịda mba.
Meta TR nwere ịrịgo, oke osimiri enyi na enyi nke ogo 78.6 na izu ike 64 na ọkara ntụgharị ihu. Ntugharị Shimano dị iche iche dị ka ụlọ na teknụzụ na-achọ ihe dị ka ọ dị mgbe bọmbụ gafere site na ala siri ike.
Ekele dịrị ndụdụ nkwusioru. O nwere nnukwu ndụdụ ndụdụ 36 n’ihu yana ihe na-ese n’elu mmiri n’azụ. N'otu oge, na njegharị, ihe abụọ XC brek na ibu diski rotors hụ akara.
Bikzọ ụkwụ ụkwụ anaghịzi adị egwu dị ka igwe kwụ otu ebe XC, mana ọ bụghị dị ka ezumike dị ka igwe enduro. N'ezie, MTB bụ maka onye ọ bụla, mana ọ dịkwa mma ịmara na ụfọdụ igwe kwụ otu ebe na-agbaso geometry nke enduro bike end of the spectrum na-ahọrọ. Ndị ọzọ na-adabere n'akụkụ akụkụ XC.
You dịla njikere, nzọ ụkwụ Bike Blake? Ilzọ: Adị m njikere, Trangel.Traelel: Ọ dị mma, n'ime atọ, abụọ, otu, gawa. Nzọ ụkwụ: Nke a bụ ọsọ m.
Ka anyị hụ ihe Enduro Bike Blake nwere. Trengel: Enduro bike, ị dịla njikere? Enduro: ee. Trengel: N'ime atọ, abụọ, otu, gawa.
Enduro: Laghachi na Trangel. Nye anyi oge, mmadu. Trengel: Ndi nwe mmadu, oge, imaghi ha, nri? Enduro: Mba.
Trangel: Trail Bike Blake, ị mere ya na 1 nkeji na 12 sekọnd. Eeh. Trengel: Emere nke ọma.
Nke ahụ mara oke mma. Ị mere nke ọma. Mara mma ngwa ngwa.
Enduro Bike Blake, ị mere ya na 1 nkeji 9 sekọnd. Ee, nwute. Anyway-- Enwere igwe kwụ otu ebe anyị na-efu efu.
Na-eme. Know mara ihe ọ bụ Ọ bụ nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ a dị ike, ruru eru na vasatail igwe kwụ otu ebe, ma ripping dị gị mkpa karịa ọduọ, ị ga-hoo haa na-ahọrọ a igwe kwụ otu ebe ogige shredder n'elu ihe enduro ọduọ bike.
M ga-akụghasị ụgwọ ahụ. Lelee nke a. Nke a bụ kpam kpam ọhụrụ imewe Commencal Nsogbu na ọhụrụ jiometrị na ọhụrụ kinematics.
Igwe a nwere ike ijikwa ihe niile: Enduro, ndagwurugwu, ogige ntụrụndụ, ebe ndị oyi na-atụ, ọbụlagodi ụfọdụ ụzọ ọrụ aka nwere ike ịnya. N'adịghị ka igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ bụ 29ers, nke a bụ 27.5 na ihe a bụ anụ ọhịa.
N'ikwu okwu banyere anụ ọhịa ahụ, njem dị n'ihu a bụ 180 mil njem na Fox 38. Na azụ bụ Fox DHX2 a na 170 mil njem. Ọkà okwu 1: Laa azụ ha, ndị iberibe abụọ. Usoro: Agwara m ha okwu m. Ezigbo: Ha bụ ndị m mara mma. Trail: Ha bụ ndị m mara mma .Enduro: Ndị m mara mma. Trail: Kwụsị ya. .Tuchie ya. Uzo: Ha ma na ha bu nke m- Enduro: Ndi m mara mma .Tụgharịa: Bịa, onye ọzọ na-agwa m okwu.
Ndị a bụ ndị m mara mma ma ị nọ ebe ahụ - Enduro: Ha bụ ndị m mara mma. Trail: Naanị kwụsị ịnwale. Enduro: Ha bụ ndị m mara mma. Trail: Ka anyị ghara ikwenye, ọ dị mma? Enduro: Ee, ọ dị mma.Trail: zuru okè, gaa n'ihu. Nke a bụ nzọ ụkwụ vesos Enduro.The nzọ ụkwụ bike zuru okè n'ihi na ogologo, The Epic ahụmahụ ebe ụzọ ụkwụ dị nwayọọ na ewepụghị.
Ikwesiri imewanye ngwa ngwa gi. You nwere ike ịzọ ụkwụ. I nwere otutu ugwu.
Ha dị ukwuu na nrịgo. Abịa n’okporo ụzọ gnarled, ihe ndị a nwere ike. Enwere m ike ịgba ọsọ ụfọdụ ihe na - eme ka m ghara ichegbu onwe m maka ịnya ụgbọ mmiri.
Mgbe ọ na-abịa ibu jumps, ma eleghị anya, ọ bụ ntakịrị ihe maka nke a Ihọd. Enduro: Ọ bụ ntụpọ na. The enduro igwe kwụ otu ebe.
En duro bike, mgbe ọ na-abịa gnarled alpine ụzọ ụkwụ, ihe a bụ ibu ike nke nnukwu, ogologo ụmụ. Still ka nwere ike ịrịgo n'elu na-enweghị nsogbu ma ka na-eme ya, mana mgbe ọ bịara nnukwu jumps nke a bụ- ị gaghị enwe mmetụta ịma aka. Igwe kwụ otu ebe a nwere ike ịga ọkụ mmụọ.
Ana m agwa gị ihe, nsogbu a, Blake, bụ ihe efu. Zọ: Ee ee. Echere m na ọ dị oke nzuzu, nwanne.
Enduro: Super steezy, bro Anyị ga-ahụ ndị mara mma ma emechaa. Trail: Pop ya. Enduro: Bịa, nke m, dude.
Ndị mara mma bụ nke m. Okporo ụzọ: Ha bụ nke m. Enduro: Mba: Okporo ụzọ: Ha bụ nke m.
Are nọghịdị ebe ahụ. Lee, onweghi onye no ebe ahu. Onweghi onye no ebe ahu.
Naanị m na-agwa chi ahụ m Enduro: Hey.Trail: Oh, ọ laghachi azụ. Pụọ.
Ọ laa. Lee gị mgbe e mesịrị, ọmarịcha ndị mmadụ.
Ngwurugwu Canyon ọ na-enweghị tube?
Kaniyonọnọde iheSpectralAL 6.0 nwere ọkpọkọ dị n'ime, mana rim na taya dịtubelessdị njikere.Sep 11 2019
Ọ bụrụ n’ịlele ọtụtụ akụkọ GMBN, ugboro ole ka anyị nwere ike ịgwa gị na ọkpọkọ tubeless dị mma? Ọ dị mfe karịa na ị gaghị enweta ọtụtụ taya dị larịị, nke ọma na isiokwu a anyị ga-apụ ebe ahụ ma anyị ga-egosipụta nke ahụ. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mfe karịa na ị ga-enwe obere punctures na ụfọdụ ule. Yabụ ka anyị bido ozugbo.
Yabụ, ọ bụrụ na ịmaghị ihe tubeless bụ, ọ bụ na ị na-enye tubing. Need chọrọ ụfọdụ teepu, ị chọrọ gị valvụ, ụfọdụ akàrà, ùkwù na ọnụ gị na wheel na taya na hey presto! Tube nweghị tubeulu ma dị njikere ịga. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma otu ị ga - esi mee ya, mgbe ahụ anyị nwere edemede zuru ezu, miri emi na - egosi gị etu esi eme ya.
Ma, ka anyị gaa n’ihe atụ nke mbụ. Na mbu, tubeless dị ọkụ. Ka anyị gosipụta na ọnụ ọgụgụ m tinyere ebe a maka nnukwu carbon FSA rim.
Mgbe ahụ, anyị gbakwunye taya. Ọ dị mma, ya mere, nke na-atụle 1,615. N’ikpeazụ, anyị ga-abanye tub ahụ dị n’ime.
Ya mere maka nhazi a, ọ na - abata na 1,855. Ugbu a, ka anyị wepụ tube a ọzọ. Anyị ga-etinye valvụ ahụ na rim n'onwe ya.
Ọ bụrụ na m nwere ike ịhụ oghere valvụ. M ga-etinye na taya. Yabụ ugbu a, ka anyị gbakwunye 100 mils nke sealant na-enweghị tube.
Nke a wetara m n'ahịrị ebe a. Ọ dị mma, nke ahụ bụ akụkụ ikpeazụ nke akara m. Enwere m 100 mils na ya, nke ahụ bụ ego kwesịrị ekwesị maka karama ọ bụla, ọ dịkwa kilogram 1.74.
Nke ahụ dum bụ gram 100 dị ọkụ. Mythbust Otu mechara n'ihi na tubeless dị ọkụ. Dịkwa mma, ya mere, anyị egosila na ntọala tubeless na-echekwa 100 gram kwa nza.
Ma gịnị ka nke ahụ pụtara n’ezie n’elu igwe kwụ otu ebe? N'ihi na ị ga-echekwa ụfọdụ ntụgharị. Ọfọn, ntụgharị ntụgharị bụ oke nke na-agagharị mgbe niile, yabụ ihe dị ka wiil gị nwere mmetụta kachasị ebe ahụ. Ọfọn, nke ahụ bụ, dị ka etiti ahụ n'onwe ya ma ọ bụ ọbụna ujo na igwe kwụ otu ebe.
Ma olee otú nke ahụ si emetụta gị mgbe ị na-anya ụgbọala? Ka ekwukwa na okirikiri mmadụ nwere ike ịme ihe ruru okpukpu atọ karịa nke a na-anọ ebe a. Ya mere, anyị ka zọpụtara gram 100, yabụ okpukpu atọ. Anyị echekwala gram 300 wee nwee ụkwụ abụọ.
Anyị echekwala gram 600 maka mmelite dị mfe ma dịkwa mfe nke na-agaghị efu gị oke. Ugbu a, ihe a niile na-eme na usoro maka oge nke inertia. Ọ bụrụ na anyị nwere ndị ọkà mmụta sayensị, mgbe ahụ anyị ga-achọ ka ị gosipụta ya.
Anyị ziri ezi, ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị emehie. Nwere ike ime ka anyị mata na ngalaba dị n'okpuru ebe a, m ga-ama ọrụ gị akara. Ya mere, anyị mụtara na tubeless dị ọkụ, ị nwere obere ntụgharị na ibu, mana gịnị banyere anyị? Achọrọ m ịma ma ị ga-enwe obere punctures? Ya mere, ka anyị nwalee ya.
N'ihi na enwere m wiilị na jig. Aga m ewere ngwa ọrụ m ebe a, ọ bụ ogwu. Anyị na-aga ịfụfụ taya wee tinye ya n’ime ebe ahụ ka anyị hụ ma ọ na-aka akara.
Ya mere ị dịla njikere maka nke a? Atọ, abụọ, otu na aga m enweta ngwa ọrụ m ike gwụrụ. (Hissing ụda) Ọ dị mma, ịnwere ike ịnụ ikuku na-apụta. Ka anyị tụgharịa ya ma nwee olile anya mechie ya.
Ọ dị mma, anyị nwere mkpuchi si. Enweghị ikuku gbapụrụ. Ya mere, nke ahụ na-egosi akara mkpuchi ahụ, ntọala enweghị eriri rụrụ ọrụ ya.
Ugbu a ọ bụrụ na ị nwere ọkpọkọ na wiilị a, ọ ga - abụ egwuregwu ma ọ bụrụ na ị magburu ya init ka ị gaghị enwe ike mechie tube ahụ. Ikuku ga agbaba ma njem gi ga-agabiga. Nke ahụ bụ akọrọ ọzọ maka tubeless.
Ọ dị mma, ya mere, gaa n'ihu, anyị na-enweta ihe n'ime taya ahụ. Ka anyị kwuo karịa gbasara mmetụta na ihe dịka agwọ. Ugbua lee ihe na-eme ma ị nweta ebe agwọ bụ na ị nwere mmetụta gị, aga m ewere aka m dị ka ihe atụ ma ọ banye ozugbo.
Ọ na-aga site na taya wee kụọ ọkpọkọ na rim. Ugbu a mmetụta a, n'ihi na ọ na-agwakọta megide ihe abụọ na ọkpọkọ ahụ dị n'etiti ya, a na-atụnye ọkpọkọ ahụ n'ezie na ọ bụ ya na-akpata agwọ ahụ. Obere obere oghere ndị ahụ, dị ka ezé agwọ, ha abanyela m tube ahụ n'onwe m, nke ahụ na-emekwa ka ike daa.
Ugbu a na-enweghị tube, n'ihi na ịnweghị tubụ n'ime, ị gaghị enweta ebe agwọ ndị ahụ. Nke ahụ bụ ihe ọzọ mere na ị chọrọ nọkwasị tubeless, na N'ezie, ole na ole agazighị agazi pụtara ihe ịnya oge. Ebe ọ bụ na ị nwere nchebe mgbapụta ka mma na sistemụ tubeless, nke a pụtara na ị ga-enwetakwu njide.
Site na nke ahụ, m na-ekwu na ị nwere ike ịda mbà n'obi n'ezie n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya, ị ga-enwekwu nrụgide mgbe ị na-arụ ọrụ usoro ọkpọkọ. Maka na ịchọghị ịgafe ike wee nweta agwọ, ma ọ bụ na ịchọghị ihe ọ bụla ka ọ banye n'ime taya ahụ, achọrọ m itinye obere nrụgide, mana n'ihi na ị ga-ewepụ nsogbu abụọ ahụ na tubeless sistemụ, ị nwere ike ịhapụ obere nrụgide. Ugbu a, anaghị m ekwu maka nnukwu ego ebe a.
Ana m ekwu abụọ, atọ, anọ PSI; ha niile na-agbadata ntakịrị nnwale n’ihi na ịchọghị ka taya ahụ tụgharịa ma ọ bụ ọbụ banye n’okpuru gị. Ya mere, were taya a were tuo nnu. Kpoo ntakịrị.
Wepụ ụfọdụ PSI. Ga-enwekwu ike, nke pụtara na ị ga-enwe ike ịnya ike ndị ahụ na-esiri ike ma ị ga-enwe ike iwepụ obere oge ma emechaa. Kedu nke pụtara na ị ga-enweta ngwa ngwa ma nwekwuo ọ funụ.
Ọ dị mma, ya mere maka ule nke ise na nke ikpeazụ, enwere m abụọ? Nwere ebe a. Rim ndị ahụ yitere, taya ndị ahụ yitụrụ na nrụgide dị n’ime ya. Nanị ihe dị iche bụ na nke a nwere ọkpọkọ na nke a, nke ọma, ọ bụ tubeless Ana m eme obere ule nyocha iji gosi gị mgbe ha na-agbanwe n'ezie na nrụgide.
Ya mere, mgbe m pịrị apị a na tube, ị pụrụ n'ezie na-eche na ọ bụ ezigbo ike deform na taya. Mgbe m weere taya m na-enweghị tube, ọ ga-adịrị m mfe nrụrụ na taya ahụ. Dị nnọọ n'ihi na ị na-adịghị n'ime akpa ọ pụtara na-erughị eguzogide dị mkpa n'ezie deform na taya.
Nke ahụ pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ maka bumps ntakịrị ntakịrị na rocksat na nwayọ nwayọ; ọ ga-enye gị naanị njem dị ụtọ. Nke a apụtaghị na ọ dị ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ. Ma mgbe ị na-agba ịnyịnya na ọkwa kachasị elu, obere perk ọ bụla na-enyere aka na-aga n'ihu, ụfọdụ eziokwu banyere ihe mere ịchọrọ ịga tubeless Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ndị ọzọ sitere na GMBN wee denye aha ha ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla.
Wee pịa ebe ahụ ka ị gaa Tubeless ma pịa ala ebe ahụ ka ịtọọ nrụgide taya gị. Ọ bụrụ n’ịchọtala ka isiokwu a bara uru, kọọrọ ya otu enyi gị ma nye anyị isi mkpịsị aka. Cheers!
Canyon na-eme ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Canyon anyịnya igwebụ ndị a na-ahụta dị ka ụfọdụ ọnụọgụ nhọrọ kachasị mma na ahịa, na-enye ihe njedebe dị elu karịa ọtụtụ ụdị na akara ọnụahịa ọ bụla, n'ụzọ dị ukwuumerega-ekwe omume n'ihi ụdị ahịa ahịa German nke a na-ere ahịa.
Isi ihe a bụ ịjụ ndị na-ese ihe nkiri mgbe ha gbagbusiri ọ bụla iji hụ ogbugba narị dollar americanand canyon na-akọwa ya dị ka igwe egwu na-enweghị atụ na-enweghị mgbakwunye squishy bitsnow na-enwe obi ụtọ na ha nwere obere squishy n'ụdị nke ansr suntour xcr ndụdụ n'ihu na 140mm Travel agbakwunye tupu anyị abanye na ụdịdị ahụ, anyị ga-ekwu maka ụfọdụ nkọwapụta etiti ugbu a dịka ị ga-atụ anya ka etiti ahụ dị mfe, mana Canyon wuru n'ime ntụgharị na mpụga, akara azụ breeki bụ mpụga, yana ihe niile ọzọ abanye n'ime eku. Otu ihe m chọrọ ikwu bụ na n'azụ breeki ụlọ ndu, mbụ dịkarịsịrị isi tube, bụ n'ezie nnọọ azụ na na-emepụta a nnukwu akaghị USB na n'ihu igwe kwụ otu ebe ewepụghị na-eme ka etiti ahụ. mara mma nkọ enwere ọtụtụ ohere maka taya 2.6 nke anụ ọhịa Wideear na etiti miri emi na-adọrọ adọrọ na-eme ihe ike.
Ka anyị kwuo maka akụrụngwa ndị Stoik hapụrụ, na otu ihe doro anya, ịkọwapụta ụzọ siri ike 1100trail ugbu a enweghị ike ịdị nfe dịka ị nwere ike iche na enwere ihe ole na ole na-eme to nwere ike ịkwalite ihe, ị maara nke a bụ igwe kwụ otu ebe ị ga-edebe maka oge, ihe mbụ a post dropper bụ ịchekwa ego na Stoic 3 anaghị abịa na a dropper post ma ị nwere ike ịga ebe Chọta ihe dị ka nke a n'etiti 100 na 200 Ikekwe ị banye akaụntụ ọnụahịa nke igwe kwụ otu ebe. Ugbu a ihe ozo n’eji Shimano Dior 10 speed drivetrain abughi ihe ojoo n’enwe 10 gears kari 11 ma obu 12, mana cassette ha kwuru n’ebe a bu 11 ruo 42, nke bu ugbua pere mpe karie otutu? otu ihe nke ọzọ anyịnya igwe na ị na-adịghị na-agbanwe maka oge bụ na taya nke a igwe kwụ otu ebe na-speckled na oké taya ọ nwere ilo Hans Domf na ndabere na bụ ihe niile na-gburugburu nso nke chebaara ngwa ngwa Rolling na taya na a burly Mary n'ihu, Ma na a adụ na grippy ime ụlọ mix na ndị a na-n'ịnyịnya Toalex rims na n'ime obosara nke 30 millimeters. Anyị ga-ekwu okwu banyere wiil ndị a mgbe emechara nyocha ahụ, mana nke ahụ bụ ezigbo ntọala pụtara na geometry na-aga n'ihu stoic 3 na-enweta akara ogo 65 ugbu a nke a bụ otu etiti maka ụdị ọmarịcha ụdị ha niile na ha niile nwere otu geometry enwere slacker akụkụ ụzọ na hardtails na e nwere ndị steepers ndị, ma cheta kani si nkọwa nke igwe kwụ otu ebe ọ kwesịrị ime ụdị nile nke ihe, n'ihi ya, ọ na-nwetara a siri ike isi n'akuku, ya mere, a ukara ụzọ na-akọwa bụ na isi nkuku na-eme ọtụtụ ihe ọ bụla anyị na-eme ya na igwe kwụ otu ebe niile ga - enwe oghere oche 75 dị ogo na ụdị 29er ga - enwe triangle azụ 428-millimita ma ọ bụrụ na ịhọrọ nha nke na - abịa na eriri igwe elekere 27.5 nke anụ ọhịa ọ ga - agbada na 418 millimeters.
Obere usoro dị nkenke na-amalite na 380 millimeters, mana na t Isi nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche gbatịrị ruo 505 millimeters. Nke a bụ igwe elekere ịnya igwe na-ajụ nke na-anọdụ na 455 millimeters yabụ ọtụtụ igwe kwụ otu ebe siri ike ị nweta ugbu a ma ọ bụrụ na ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ Canyon ma cheta na nke a bụ igwe kwụ otu ebe, aga m achọta ụlọ ahịa abụọ, nke mbụ bụ nke a stoic threesome bụ iri na otu narị na dollar American na ọ dịrị ihe 32 pound na abụọ ounces niile ziri ezi na nke ahụ bụ ezuru banyere jiometrị na akụkụ niile na ihe na-abịa na, ka anyị kwuo banyere otú ọ na-akwọ ụgbọala e ị nwere ya ndị ahụ bụ nkọwa maka Canyon stoic otu esi etinye ihe a nke ọma ọ bụ ihe siri ike nke mere na ọ dị mfe mana enwere ihe ole na ole ị ga-ekwu, nke mbụ bụ na ndụdụ suntour enweghị tebụl ikuku akwadoro na azụ nke ndụdụ ahụ, yabụ a bit nke ikpe na njehie, lee ihe m kwuru ikuku ikpe na ikuku oh gotit smart smart mfe na ujo mgbapụta ọ maa setịpụrụ ya ebe ọ kwesịrị ịbụ, ma ọ bụ d efinitiv a usoro ihe ọzọ ihe banyere ya abịa na-abịa akwa taya na rim ndị a 30 millimita widealex rim na ndị a Schwalbe taya ọ bụ samagic Mary elu n'ihu na-etinye ha tubeless na ụzọ ụkwụ na ị dị njikere ịga mbụ i nwere a igwe kwụ otu ebe na Nweta nke rịa, gịnị ka ọ bụ? Ọ bụ hardtail, yabụ ana m ekwu na ọ na-adị mma ịrụ ọrụ nke ọma. Agaghị m achọ ka ụgbọala ahụ nwee ọtụtụ ebe dị anya karịa na ọ bụ cassette 11 ruo 42 na nke ahụ dị mma na anyị, mana echere m na anyị bụ naanị echere m na anyị na ndị Widerange cassettes nọ ihe niile dị nro, dị mma nke anyị nwere abụọ n’ihu.
Igwe kwụ otu ebe a bụ ise, yabụ kpọm kwem, mana ọ ga - ewe gị iwe, mana maka onye ọhụụ, ee, m na - ekwu, ọkachasị mgbe ị nwere nnukwu ugwu ebe ị bi mgbe onye ọhụụ ọhụụ ga - ahụ na ịchọrọ ọkwa dị ukwuu, yabụ nke a nwere ike Bụrụ ihe ịchọrọ itinye na ọnụahịa igwe kwụ otu ebe, $ 100 ọzọ maka cassette nwere ụfọdụ ebumnuche buru ibu, ụdị geometry dị iche iche na-agbada n'okporo ụzọ yana ihe anaghị adị oke elu ma ọ bụghị ị ga-ada ụkwụ mgbe ị batara n'ihe a ọ naghị adị ka agbụrụ mba na-agba ọsọ ọsọ, enweghị obi abụọ banyere nke ahụ, mana ọ na-agagharị karịa ihe dịka onye na-eto eto na-eche na echere m na nke a na-abịa n'ezie dabere na jiometrị nke igwe kwụ otu ebe, ọ na-adị ka igwe eji agba igwe mgbe niile. ma ọ bụghị ihe na-eme ka ọdịda pụta naanị ma eleghị anya ọ dịghị ihe ọ bụla na-ada ma ọ ga-eme ka ị nọrọ n'elu ebe nrịgo ahụ ma echere m na ọ bụ ya. Bike bụ ịchụpụ gị ebe ahụ ka ị nwee obi ụtọ na ugwu ugwu, onye na-atụ mmiri post ga-enyere m aka ma echere m na nke a dị ka a 1100 hardtail me putara ihe ichoro, i nweghi ike inwe ihe nile, ya mere ihe niile di otu a? ike bụ ya, ị maara na ọ bụghị kpọmkwem nri, um ihe m ga-ekwu banyere ndị a na taya ndị dị ịtụnanya na ụzọ ala, ma ha maa anaghị enyere anyịnya igwe n'ihi na ha nọ na ụzọ anyị rịdata ụzọ ọkụ igwe kwụ otu ebe doro anya na ọ bụ Inmolasse, ị maara, ọ bụghị ihe kachasị ọsọ na-apụ apụ, mana m na-ekwu na ihe a bụ ka emee ka ị pụọ ebe ahụ wee rute ugwu ahụ na-abịa. ị maa-eme ya n'elu nke ịrị, ihe bụ akụkọ, ee kaniyon wuru Stoic dị ka a na-aga n'ihu hardtail, ma ha na-ekwu na ọ dị mma na a otutu dị iche iche ihe, si nzọ ụkwụ nọkwasịrị ruo unyi jumps nke m na-ekwu bụ a mara mma dịgasị iche iche nke stof na na nzọ ụkwụ na igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ nke ọma na a otutu ntọala ma ọ bụrụ na ndị gbapụrụ ọsọ adịghị elu mgbe ahụ ọ dịghị ihe na-ezighị ezi na jiometrị ma ọ bụ Sun Tour ndụdụ na anyị ga-ekwu banyere mgbe e mesịrị, ndụdụ n'ezie na-arụ ọrụ mara mma nke ọma, Na na na, mgbe ihe na-ngwa ngwa na ike ike igwe kwụ otu ebe enweghị ike ijide w ọ bụ ihe dị ka onye na-eto eto, ọ na-eche ntakịrị ụjọ na, mana ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọdịnala ọzọ na ụzọ ụkwụ gị yiri nke ọma na ntọala ndị a ihe dịka stoic nwere ike ịdị ngwa karịa onye na-eto eto, ọbụlagodi gị mara, karịsịa mgbe ọ na-amị amị na ala m hụrụ ndụdụ ihe siri ike dị ka ị na-ekwu na nke a bụ ihe ọma nkwusioru n'ihi na ọ bụ ihe 1100 cc igwe kwụ otu ebe ka ị na-ekwu? Ọ bụ oge ngwugwu ngwongwo, m na-ekwu nke mbụ, o doro anya ma ọ bụrụ na ị rịgoro elu ndụdụ dị elu, ọ bụrụ na ị gbagoro ihe dịka ndụdụ Fox Rhythm ma ọ bụ Z2, ọ bụghị na ọ bụghị na ọ dị ọnụ ala karịa ihe ndị a na nke ahụ dị mma, ọ na-ewepụ gị ebe ahụ na maka ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya nke na-agaghị akwụsị ha ihe mgbochi ahụ m chere na ọ na-achịkwa eziokwu, m ga-asị na enwere oge mgbe ọ dị obere karịa ka m gaara mmasị, ọ na-adị ya ka ọ na-eme ka ụzọ ya dị larịị karịa ka ọ na-eme njem site na njem nke na-adịghị mma mana n'ozuzu m apụtaghị na ndụdụ a na-ejide ọtụtụ ndị mmadụ ga-eme, ime ihe n'eziokwu, ọbụlagodi ị na-eji igodo Allen belata sadulu a ka ọ na-ada ka ike nke igwe kwụ otu ebe dị nro dị mma, mbara ala ahụ dị ala, ee na nke ahụ abụghị ihe ịtụnanya, ikwu eziokwu, ọ bụ igwe kwụ otu ebe na-ahụ ụdị ụdị ahụ ọ bụ n'ezie ihe ọ toụ na-esite na osisi, anyị nwere nzọ ụkwụ nke anyị nwalere ịnyịnya ígwè ndị a ma ọ dị ọhụrụ eled ya mere na ọ mara mma nke na ọ na-adị gị ka ị nọ n'elu igwe na-agba ọsọ ọsọ site na osisi, ọ dị ezigbo mma ngwa ngwa ma na ọnọdụ ahụ, m na-ekwu na enwere m obi ụtọ dị ukwuu na igwe kwụ otu ebe, achọrọ m nkwụsị azụ na mma brakes na akwa gear. mara? M na-eme, mana anaghị m enweta nke ọ bụla n'ime ego ndị a otu narị na iri na otu. Ya mere, mgbe m nwere iri na otu narị na narị dollar m na-eche na m mara mma obi ụtọ na m na-ekwu okwu banyere mmiri ugbu a.
Kedu ụfọdụ isi ihe dị na spikes a nke m chere ga-abụ nke kachasị elu nye m? wheel na taya ngwakọta site na mmalite ihe a na-abịa na Alex rims ndị a na obosara nke 30 millimeters, e nwere ọtụtụ nke ọnụ ala anyịnya igwe si n'ebe na-abịa na ndị a obere pennypinner taya na nke ahụ adịghị mma, ọ na-enye gị bụghị nkwado ị chọrọ, karịsịa maka igwe kwụ otu ebe dị ka nke a nke nwere ike ịga na nsị jumps, nwere ike iji oge dị ukwuu na-akụrisị ndị bi na mgbapụta mgbapụta uh na ọzọ taya ndị na-eso ya bụ ezigbo schwabet na-adịghị mma n'ezie, ọ dịghị mkpa ịgbanwe ha ruo mgbe ha gwụchara ihe ọzọ, ana m akwa obere banyere nso nke ọsọ ọsọ ọsọ nke 10 ma eleghị anya, achọrọ m ịmekwu squats na lunges ma ọ bụ ihe dịka nke ahụ n'ezie ọ dị ntakịrị ka e jiri ya tụnyere ihe a ma ọ bụrụ na ị pịkwaa akwa ahụ ọ na-aga ogologo wara wara na enwebeghị mgbe m nwere nsogbu ọ bụla yabụ echere m na nke ahụ bụ nnukwu ihe ọzọ dị mma gbasara ụfọdụ n'ime ihe ndị ị na-esighi dị ka onye na-akwado ihe ọma dị mma bụ teepu a? Agabigala oge ole na ole, mana echere m na ndị na-agba ịnyịnya ọhụụ ọkachasị ndị na-achọ ịbanye n'elu ugwu agaghị enwe ike ịgba casset nwere ọtụtụ ebe ma ọ bụrụ na ị zụrụ igwe kwụ otu ebe a ka ị nwee obi ụtọ Inwe egwu mgbapụta na unyi na-awaba nke ọma mgbe ahụ, m na-ekwu na onye na-eche banyere ya, mana ogologo oge ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe karịa ndị ọzọ na breeki ọzọ igwe anaghị akwụ ụgwọ na resin pad na rotors nke soro ha Pads dabara, ị maara ihe ndị a na-efu ego ma ha ga-anwa ịchekwa ego site na narị asaa dọla pụrụ iche naanị iji mee nhọrọ ziri ezi, agbalịrị m ike mana ihe bụ na a na-eme brek na resin pad ndị ahụ, ndị mmadụ ejiri n'aka na ha bụ were nwayọ, enwetara m ya ma ha dị ọnụ ala, mana nke a bụ mmelite ọzọ ị nwere ike ịchọrọ iji ụdị breeki breeki dị iche iche na ihe ndị ọzọ ..Mgbam igwe dị iche iche, otu narị na iri na otu, ọ bụ igwe dị ọnụ ala anyị nwere ebe a Sarah, ma nke ahụ apụtaghị na ọ dị mma v n'agbanyeghị na ị na-atụgharị na wiil ahụ na mgbanwe ndị m na-ekwu, nke kachasị ọnụ bụ post dropper. Echere m na nke a bụ ihe m ga-ahụ maka m n'onwe gị, ị nwere ike ịchọta nsị ntanetị n'etiti 100 na 200 dabere na ihe ị kpebiri, ka anyị kpọọ ya $ 150 maka ihe ọzọ ịchọrọ, m ga-enwe katrij dị iche na azụ, maka ọzọ narị dollar maka ọtụtụ cassette na nke ahụ na-enweta igwe kwụ otu ebe ruo 1,350 na-enye ma ọ bụ were ntakịrị dabere na ebe ị ga-ahụ akụkụ ndị ahụ ma jiri eziokwu mee ihe mgbe ị gbanwere mgbanwe ndị ahụ ị naghị ahụ ọtụtụ ihe ọzọ, ihe ịchọrọ ịgbanwe m chere na ị ga-enwe obi ụtọ na igwe kwụ otu ebe a ma ee, m ga-eche na ihe a bụ uru bara uru maka ego.
Oge erugo ikwu banyere ihe ọma na ọghọm. Ka anyi jiri ihe oma bido. Ee, anyị na-amalite na nke ziri ezi na mbụ na nnukwu ihe maka m bụ mgbe ị nwere ike nweta ya na-eji ire ụtọ, ịma aka-ụzọ ọmụmụ ebe cornering na pumping nkà abata play.
Echere m na obere igwe kwụ otu ebe a bụ ihe gbawara agbawa n’ebe ndị dị otu a, na enweghị ụta ọkpọkọ ma ewezuga njigide a na-enyo enyo na ha ga-apụ n’anya n’ọrụ igwe kwụ otu ebe, nke bụ maka inwe anụrị, ihe ndị ahụ na-ewelite igwe kwụ otu ebe na - eme ezigbo oge Kedu maka ụfọdụ ihe ị na - enweghị mmasị banyere igwe kwụ otu ebe a, enwere naanị otu ihe ebe a, ị maara na ọ bụghị igwe kwụ otu ebe ka ọ bụrụ na ị na - achọ hardtail na ọtụtụ n'ime ụzọ gị dị nkpoda ma sie ike ma nwee esemokwu, ị maara na ọ bụ ọkwa siri ike ịbanye ma jiometrị a na-akwụghị ụgwọ yana jiometrị nwere ike ime igwe kwụ otu a karịa ka ọ dị, mana etu o si daba, ọ bụ na ọ bụghị igwe kwụ otu ebe maka nke a nke siri ike n'okirikiri igwe kwụ otu ebe maka ala dị larịị maka ụzọ dị larịị na maka flowiertrailsalles ziri ezi, anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njedebe ka anyị chịkọta onye igwe kwụ otu ebe a bụ, yabụ Canyon na-ewu ihe a? Adị m njikere maka ihe niile, site na mgbapụta egwu na ụzọ ụkwụ na-agba ọsọ na-adịghị ọcha, n'ezie na imeru ihe oke na ee, ekwesịrị m ikweta, ọ bụ ọgbụgba na ihe ndị a niile s andi my sarah igwe kwụ otu ebe na-efu ihe na-erughị na tim hortons na otu ọnwa ma ọ dị mma nke ukwuu karịa m na ọtụtụ ihe ọchị enwere ihe iji melite ma ị nwere ike ime nke ahụ mgbe ị dị njikere, mgbe ị nọ ya na mgbe ala ahụ kpọrọ ya, mana rue mgbe ahụ $ 1,100 Echere m na ọ na-esiri m ike ịkatọ ihe a mgbe ị na-achọ igwe kwụ otu ebe na ị nwere ike ịga ọgba tum tum. The Stoic 3 bụ ihe ezi uche dị na nhọrọ nke nhọrọ, nke ahụ bụ maka oke mmiri ahụ dị ọcha 3. Echere m na ọ bụ ezigbo oge dị mma ma ọ bụ ezigbo azụmahịa, denye aha na ọwa ka ị ghara ileghara nyocha ọ bụla nke njem igwe kwụ otu ebe, n'ihi na enwere ọtụtụ ihe na-abịa ma anyị ga-ahụ gị oge ọzọ
Nwere ike ịrị ugwu Canyon?
Na ya grippy MAXXIS Minion na taya naSpectral29 abụghị ihe elu ugwu, ma maka yana-eme, ọnrịgooke. Ọ bụrụ n’itinye uru karịa na elu ugwu, ị kwesịrị ilekwu anya naKaniyonNeuron, nke anyi nwalere.Dec. 1 2020
Kedu ka canyon si agba mbọ ịrị?
Naịrị ugwumode, oge opupu ihe ubi na-agbatị ma na-agbatị njikọta, na-eweli BB igwe kwụ otu ebe, na-agbatị elu isi ya, na-agbanwe kinematics nkwusioru, ma na-amachi njem na 135mm. Kpoo onye na-ejide Clack na mmanya ahụ, igwe kwụ otu ebe na-agbadata ala ka mmiri gas na-ebelata.Jenụwarị 17 Dec 2019
Nwere ike itinye ihe ịtụ egwu na ndagwurugwu canyon?
Ọ bụ ezie na a haziri igwe kwụ otu ebe na gburugburu ikukuujo,Kaniyonkwuruọ gana-arụ ọrụ nke ọma na aeriri igweOtú ọ dị, ụfọdụ buru ibueriri igwe na-ama jijiji gahapụ igbaa mmiri karama ahụ. Gaba naKaniyonweebụsaịtị maka nkọwa ndị ọzọ ma wuo ụdịdị kit.Dec. 1 2020
Ugbaala Canyon na-abịa na valvụ tubeless?
Ha anaghị eme yabiamelitetubelessdika habiana Conti ma habianavalvụya mere na ihe nile ị chọrọ bụ taya na akàrà. Ichorokwavalvụ.Mar 3 2018
Emere igwe kwụ otu ebe na China?
Kaniyonokpokolo agbaemepụtan'Eshia, ebe ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ nwere otu ndị na-eme 'nnwale njikwa mma.' Ozugbo ebufere okpokolo agba na Koblenz,Kaniyonna-eburu nnwale nke abụọ. Onye ọ bụlaigwe kwụ otu ebenwere akara atọ, nke abụọ na etiti na otu na ndụdụ.Sep 13 2017
Ebee ka ụgbọ mmiri Canyon si?
Ugba ịnyịnya ígwèga-abụẸnam ekeseesi na ụlọ ahịa Chino, California pụta, ebe isi ụlọ ọrụ ọhụrụ nke United States ga-arụ ọrụ na Carlsbad, California.
Ndi kaniral spectral a igwe kwụ otu ebe nke afọ?
Canyon Spectral CF 8.0 bụ otu n’ime anyị igwe kwụ otu ebe nke afọ maka 2019. Iji gụọ nyocha nke ndị ọzọ na-ese okwu na edemede ndị a nwalere gafee okporo ụzọ, ugwu ugwu na ụmụ nwanyị, gaa na anyị Bike of the Year hub page. Na mgbakwunye na njem ndị ọzọ, 2019 Spectral kpochapụrụ taya abụọ nke 2.6in maka 'obosara' nkịtị '2.4in.
Kedu ihe na-eme ka Canyon spectral al 6.0 pụrụ iche?
Ihe nlere anya anyi nwere n’ule bu Spectral AL 6.0 - ihe kachasi nma nke di n’elu alloy. 2019 Canyon Spectral AL 6.0 bụ otu igwe kwụ otu ebe dị mma. Ihu Spectral ahụ siri ike nke ukwuu, ọ kachasị ekele maka ndụdụ Fox 36 na-egbuke egbuke. Gịnị Na-eme Ka Ọ Pụrụ Iche?
Ebee ka m ga-anwale ọwa ọhụụ nke 29?
Tupu nkwupụta ihu ọha, Canyon zitere anyị ọhụụ ọhụụ 29 CF 8.0, nke m buru ụzọ hazie ma gbagoo n'okporo ụzọ ndị obodo, tupu m ebute ya na Beechworth na Victoria High Country iji nwalee otu onye ọrụ ibe m, bụ Mick Ross dị ebube.